Radio Candid - Your Voice, Your Power | युरोपेली नेताहरूमा २०१५ को शरणार्थी समस्या दोहरिने भय
युरोपेली नेताहरूमा २०१५ को शरणार्थी समस्या दोहरिने भय
अफगानिस्तानको पतन भइरहँदा युरोपेली युनियन (ईयू) का नेताहरू २०१५ मा सिरियाको आप्रवासी संकट दोहरिन सक्ने कुराको चिन्तामा थिए ।
सोमबार बर्लिनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा एन्जेला मार्केलका सम्भाव्य उत्तराधिकारी आर्मिन लास्केटले जोड दिए, ‘हामीले आवश्यक पर्दा जर्मनीलाई जसले पनि लिन सक्छ भन्ने यो सन्देश दिनु हुँदैन । हाम्रो ध्यान २०१५ मा भन्दा फरक किसिमले मानवीय सहयोगमा हुनुपर्छ ।’
यद्यपि फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल मार्कोनले अहिले अप्ठेरोमा रहेका अधिकारवादी, पत्रकार, कलाकार र अभियानकर्तालाई ध्यान दिनु पर्ने युरोपको कर्तव्य भएकोमा सचेत गराउँदै आफ्नो कुरा प्रष्ट पारेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अहिले आफ्नै अवस्थाको परिणाम युरोपले सामना गर्न सक्दैन । अनियन्त्रित बसाइँ सराइको ठूलो बहाव थेग्न सक्दैनौँ, हामीले आफूलाई त्यसबाट बचाउन पर्छ ।’
तिनीहरूको चिन्ताले युरोपेली युनियन र यसका सदस्य राष्ट्रहरूले अनियन्त्रित बसाइँ सराइ कम गर्न वर्षौंसम्म अपनाएको कठिन कट्टरपन्थी मापन अस्पष्ट राखेको छ । यसले २०१५ को पुनरावृत्ति अस्वीकार गरेको छ, जहाँ १२ लाख शरणर्थीले शरणार्थीले युरोपमा शरण खोजेका थिए । यो संख्या युरोपको कुल जनसंख्याको ० दशमलव १६ प्रतिशत हो । राजनीतिक विद्रोहको आवाजको आधारमा धम्की दिइएको भन्दै ती व्यक्तिहरू युरोपेली युनियनको शरणमा गएका थिए ।
अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ । २०१६ मा ‘ईयू–टर्की बसाइँ सराइ सम्झौता’ कार्यान्वयन भएपछि मनग्य रूपमा प्रतिबन्ध लागेसँगै युरोपमा पहिलो पटक शरणार्थी हुन आवेदन दिनको संख्यामा कमी आएर २०१९ मा ६ लाख ३१ हजार ३०० भएको थियो, जुन चार वर्ष अघिको भन्दा आधा हो । ईयूका सीमा र तटमा सुरक्षा संयन्त्र पनि कडा पारियो ।
शरणर्थी व्यवस्थापनमा शुरूमा ईयूकै अर्थतन्त्रको योगदानको थियो । उनीहरूका लागि अलग्गै संयन्त्र थिएन, न त खोजी र उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने क्षमता नै थियो । अहिले यसले जहाज र सवारी साधनमा प्रहरी राखेको छ र तेस्रो पक्षको देशसँग वार्ता गर्दै छ ।
अफगानिस्तानको घटना अकल्पनीय हो । त्यहाँ धेरै व्यक्ति देश निकाला हुन सक्ने सम्भावना छ । यो अवस्था ईयू नेताले भनेजस्तै बढी समस्याग्रस्त रहनेछ । यो अवस्था धेरै हदसम्म तालिवान सत्तामा निर्भर रहनेछ ।
शरणार्थीका लागि उजागर भएका र अग्र मोर्चामा रहेका मध्यका थुप्रै देशहरूले बसाइ सराइको कठोर नीति लिएका छन् । उदाहरणका लागि ग्रीसले २०२० मा आक्रामक हुँदै आप्रवासीलाई फर्काएर आइगेन मरुभूमिमा उनीहरूलाई प्रवेश गर्न बाट रोक लगायो, शरणार्थीको प्रवेश बन्द छ । विगतको शरणार्थी संकटभन्दा फरक, युरोपेली युनियन कट्टरपन्थी र खुला ढोकाको वकालत गर्नेको बिचमा विभाजित छैन ।
धेरै ईयू सदस्यहरूले ब्लकमै या कुनै खास देशको कूटनीतिक मिसनमा काम गरेका सीमित संख्यामा अफगानहरूलाई मात्र स्वागत गर्ने छन् । यसै गरी, तालिवानबाट सताइने उच्च जोखिममा रहेका महिला, बालिका, तेस्रो लिङ्गी, कलाकार, पत्रकार र अधिकारकर्मी यसमा परेका छन् । २०१५ मा मार्केल र स्वीडेनको दृष्टिकोण फिर्ता हुने छैन, जुन खुला ढोकाको रूपमा आलोचित भयो ।
यसबाहेक अफगानी शरणार्थीका लागि युरोपको ट्रान्जिटका रूपमा रहेका इरान र टर्की पार गर्न नै कठिन हुनेछ । २०२० को अन्त्यमा इरानले अफगानिस्तानलाई लक्षित गर्दै नयाँ नियमावली पारित गरेको छ जसले कागजपत्र नपुगी बसाइँ सराइ गर्नेहरू २५ वर्षसम्मका लागि जेल चलान हुन सक्छन् । आगामी कैयौँ साता लाखौँको संख्यामा अफगानहरू इरान पार गरेको देखिनछन् ।
टर्कीमा बढ्दै गएको शरणार्थी विरोधी मानसिकताले राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानलाई कठोर अडान लिन दबाब दिनेछ । ‘इन्टेरियर मिनिस्ट्रिज डाइरेक्टोरेट जनरल माइग्रेसन मेनेजमेन्ट’ का अनुसार २०१९ मा टर्कीले अनधिकृत रूपले बसाइँ सराइ आएका ४ लाख ५५ हजारलाई हिरासतमा राखेको थियो र एदोर्गानका लागि समय खराब रहेकै अवस्थामा थप शरणार्थी आउन सक्ने सम्भावना छ ।
उनको सरकार अनियन्त्रित डढेलो, बाढी र खराब अर्थतन्त्रका कारण दबाबमा छ । जुलाईमा शहरमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ६७ प्रतिशत मानि अफगानी शरणार्थीका लागि सीमा खुला गर्ने कुराको विरुद्धमा थिए । यीमध्येका आधा एर्दोगानकै जस्टिस एन्ड डेभ्लपमेन्ट पार्टी (एकेपी) कै मतदाता थिए ।
यी नै कारणहरूले अङ्कराले कसैले पार गर्न नसक्ने गरी खाल्डो खनेर, काँडे तार लगाएर र गस्ती बलियो बनाएर इरानसँगको सीमा जोडिएका टर्कीको ५०० किलोमिटरमा पर्खाल लगाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसकारण, २०१५ मा अङ्कराले देश छाडेका सिरियालीका लागि ओपन आर्म नीति अङ्गीकार गरेभन्दा फरक अहिले टर्की र ईयू दुवै थप बसाइँ सराइ रोक्न कटिबद्ध भएर जोडिएका छन् । यसले त्यो समयमा पछि परेको कूटनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक समन्वय सक्षम बनाउने छ ।
ब्रसेल्स र ईयू राजधानीले अनियन्त्रित बसाइँ सराइमा रोक लगाउन सहयोग गर्ने शुरूवाती संकेत दिएका छन् । टर्कीको नेतृत्वमा यसका साझेदारहरूले अफगान शरणार्थीहरूलाई त्यसै क्षेत्रमा राख्ने प्रयास गरेका छन् ।
शरणार्थीका लागि सीमा पार गर्न सहयोग गरेर प्राथमिक रूपमा पाकिस्तान, इरान वा अन्य कुनै मध्य एसियाली देशमै व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ । ब्रसेल्सले शरणर्थीका लागि राष्ट्र संघीय उच्च आयोग (युएनएचसीआर) को नेतृत्वमा अमेरिका र अन्य पश्चिमा सहयोगीसहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया मार्फत प्रेरणा खोजिरहेको छ ।
अफगानिस्तानको घटना अकल्पनीय हो । त्यहाँ धेरै व्यक्ति देश निकाला हुन सक्ने सम्भावना छ, जुन ईयू नेताले भनेजस्तै बढी समस्याग्रस्त रहनेछ । यो धेरै हदसम्म तालिवान सत्तामा निर्भर रहनेछ । तर, अफगान शरणार्थीको दबाबले ईयू र यसका सदस्य राष्ट्रका लागि व्यवस्थित रूपले चुनौती दिने सम्भावना कम छ ।
उनीहरू रहेको ठाउँमा सुरक्षा पहिचान गर्न असमर्थ ईयू नेताहरू यसको साटो आफ्नै घरको राजनीतिक विचारबाट सञ्चालित भए । चाहे त्यो जर्मनी र फ्रान्सको। निर्वाचन होस् या जनतालाई रोक्ने प्रयासमा होस् जो महामारीको समयमा तल्लो तहमै गएर प्राप्त गर्ने कुरामा असफल रहे ।
(मुजतबा रहमान युरोपका लागि युरेसिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । द गार्डिअनमा २० अगस्टमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि मनोज घिमिरेले भावानुवाद गरेका हुन् ।)
Nepali worker dies after falling from warehouse roof in Malaysia
Nepal reports 1,664 new COVID-19 cases, 20 deaths in last 24 hours
PM Deuba asks KMC mayor to clear garbage immediately
I will not hold any executive post: Leader Khanal
Maoist Center growing roots in Madhes: Chair Prachanda
Nepal registers 2,295 new COVID-19 cases, 16 deaths in last 24 hours
Gagan Thapa announces candidature for party General Secretary
Ruling coalition partners fail to take decision on cabinet expansion
क्वाडको प्राथमिकता चार वटा प्रजातान्त्रिक देशको सुरक्षित, नैतिक र रणनीतिक क्षेत्र स्थापना हो
Tune in to Radio Candid 92.7 Mhz for everything you want to hear. We are your friends at all times.
© 2022 | Radio Candid
Radio Candid is now ready with audio.